Voina · Oktobra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Voina · Oktobra, 2018
Tantara mikasika ny Voina tamin'ny Oktobra, 2018
Azia Atsimo 31 Oktobra 2018
Aleon'ny mponina mitady fomba vaovao hamahana ny olana eo amin'ny habetsaky ny fako vokarin'ny tanàna toy izay hanebaka ny ezaka ataon'ireo manampahefana hifehezana ny olan'i Bangalore eo amin'ny fandrindrana ny fako.
Honduras: Noho ny rivomahery “Félix”, nipatrapatraka ny bilaogy
« Minoa ahy, tena faran'izay tsy mampahazo aina ny manokatra imailaka ary mamaky momba ireo rivomahery mampididoza – indrindra ho an'olona iray izay tsy mbola niaina velively ny atao hoe rivomahery. »
Azia Atsimo 29 Oktobra 2018
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 29 Oktobra 2018
(2007) Sahobakaka ambody riana ireo blaogera Koetiana, niandry ireo vaovao mikasika ilay rivodoza mandravarava Gonu, izay nahafaty olona teo amin'ny dimampolo tao amin'ny tanàna mpifanolobodirindrina amin'i Oman. Milaza amintsika ny fomba nanehoan'izy ireo ny hatezerany noho ny fanontàna iray navoakan'ny gazety teny an-toerana, izay nikendry ny handoto ny lazan'ny firenen'izy ireo i Abdullatif AlOmar, izay mamerina mijery ireo blaogy rehetra.
Shina 25 Oktobra 2018
Nofihazan'ireo manampahefana shinoa ho anaty boaty mainty, toy ireo tsiambaratelom-panjakana, ny isan'ireo mpianatra namoy ny ainy tamin'ilay horohorontany tao Wenchuan tamin'ny 12 mai 2008...Maninona no tsy manao ezaka mihitsy na kely aza mba hananganana lisitra iray misy ireo ankizy mahantra tradoza ireo? Ho soa ho an'ny firenena? Firenena toy inona no manao tahaka izany? Ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka hoe? Olona toy inona no mety ho tia an'izany?
Azia Afovoany sy Kaokazy 24 Oktobra 2018
Shina 22 Oktobra 2018
Avy tamin'ireo afomanga nalefa nandritra ny fankalazana ny Fetin'ny Harendrina (元宵) ilay fahamaizan'ilay fanitarana ireo toerana hisy rahatrizay ny Fahitalavitra Foibe ao Shina (CCTV) tamin'ny omaly alina (ny 9 febroary 2009). Na dia voina tsy nampoizina aza ilay fahamaizana, nanapa-kevitra ny ''hampifanaraka'' (hanasivana) ilay vaovao ihany ny Departemantan'ny propagandy.
Israely 22 Oktobra 2018
Azia Afovoany sy Kaokazy 17 Oktobra 2018
Mandrahona ny fiainan'ny vahoaka Pamiri sy ny faritra amin'ny ankaponbeny i Sarez, ilay farihy avo marefo amin'ny fipoahana raha misy ny fisehon'ny horohorontany lehibe.
Bangladesh: Taorian'ny tondradrano
Azia Atsimo 14 Oktobra 2018
Fantatra fa olona miisa 587 no matin'ny tondradrano tamin'ny fotoana nanoratana tamin'ny taona 2007 tany Bangladesh. Efa nihena ny tondra-drano tany amin'ny ankamaroan'ny faritra saingy nanakana ireo olona voakasik'izany tsy ho tafody tany an-tranony ny tondradrano (vao haingana) tany amin'ny faritra maro .